Agaasimaha CIA-da Mareykanka oo la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi • Oodweynenews.com Oodweyne News
Agaasimaha CIA-da Mareykanka oo la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi
dawladApril 18, 2018
Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa baahisay in agaasimaha CIA Mike Pompeo uu si qarsoodi ah uu u booqday Kuuriyada Waqooyi horraantii sanadkan islamarkana uu wadahadalo toos ah la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Booqashadan ayaa la sheegay in looga gol lahaa in wadada loogu sii xaaro kulan wayne lagu wado in uu dhexmaro hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyiiyo iyo madaxwayne Trump.
Warkan ayaa soo baxay mar la qabanayay wadahadalo ku saabsan Kuuriyada Waqooy oo dhexmaray Mr Trump iyo rai’sul wasaaraha Japan Shinzo Abe.
Warbahinta dalka Mareykanka aya sheegtay in Mike Pompeo uu boqday Kuuriyada Waqooyi islamarkana uu la kulmay xilligii fasaxa Easter, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wax yar uun ka dib markii loo soo xulay in uu noqdo xoghayaha arrimaha dibadda.
Toddobaad ka dib saraakiisha aqalka cad ayaa waxay sheegeen in ay si toos ah u xaqiijiyeen in hogaamiyaha kuuriyada Waqooyi uu diyaar u yahay in wadaxajood uu ka galo suurtagalnimada in uu ka talabaxo hubkiisa Niyukleerka.
Mr Trump ayaa u muuqday in mar uu wariyayaasha kula hadlayay Mar-a-Lago oo uu sheegay in xiriirkii ugu heerka sareeyay ay la sameeyeen Kuuriyada Waqooyi uu ula jeeday kulankan.
Madaxwayne Trump ayaa sheegay in wadahadalo heerkoodu sareeyo oo toos ah ay la yeesheen Kuuriyada Waqooyi ka hor kulan waynaha la qorshaynayo in ay la yeeshaan, Kim Jong-un.
Waxa kuu ka hadlayay xilligaasi gobolka Florida waxa uuna kulan la lahaa ra’sul wasaaraha Japan, Shinzo Abe:
Waxa uu noqon doonaa kulankii ugu heerka sareeyay tan iyo sanaddii 2000, markaasi oo xoghayihii arrimaha dibadda Madeline Albright ay la kulantay Kim Jong Un aabihis, Kim Jong Il.